जनावरहरूको एक किसिम। पाठ को लागि सामाग्री
जीव मा सबै जीवित जीव, र धरती मा राज्यहरू भनिन्छ चार विशाल समूह विभाजित अवस्थित गर्छन्। यो ब्याकटेरिया, बिरुवाहरु, Fungi र जनावर। प्रत्येक संसारमा genera र प्रजाति एकाइहरु को एक ठूलो संख्या को निर्वाचकगण को एक महान विविधता समावेश छ। अचम्मको र वन्यजन्तु को एक विशाल विविधता। बारी मा, पशुहरू एकल-celled र multicellular, invertebrate र vertebrate जीव विभाजित छन्। ती अध्ययन सामना एक विज्ञान प्राणी विज्ञान (जीव खण्ड) भनिन्छ।
जनावरहरूको एक किसिम: वर्गीकरण
जीवको सामान्यतया कीडे, mollusks, echinoderms, क्रसटेशियन, arachnids र कीराहरू सम्बन्धित छन्। यी पशुहरू (हो, कीडे - पनि जनावर) कुनै भित्र वा उच्चारण मेरुदण्ड बाहिर छन्। कहिलेकाहीं त्यहाँ chitinous खोल यो भूमिका कार्य छ। vertebrates माछा, amphibians, सरीसृप, चरा, पशु समावेश लागि (यो आफ्नो बच्चाहरु स्तन दूध फीड किनभने मान्छे, पछिल्लो वर्ग बुझाउँछ)।
वन्यजन्तु एक किसिम यी प्राणीहरू अध्ययन, राम्रो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो समूह जीव को 46 भन्दा बढी हजार प्रजाति समावेश छ। कीडे फरक दिशामा शरीर झुकन द्वारा लोचदार मांसपेशीमा को माध्यम द्वारा उत्प्रेरित हुन्छन्। तिनीहरूले जमीन मा, समुद्र, नदी, ताल, swamps बाँचिरहेका छौं। उज्ज्वल, चिरपरिचित प्रतिनिधि - को खैरो। यो loosen र यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन मदत, माटो बसोबास। यो खेत काम सबै प्रकारका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। को कक्षाहरू धेरै उपयोगी कीडे छन्। उदाहरणका लागि, जूका। तिनीहरूले चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ। एक समुद्री कीडे माझिहरु द्वारा फसल व्यावसायिक माछा लागि स्थिर फीड रूपमा सेवा गर्छन्। तिनीहरूलाई बिना माछा केही प्रजाति कुनै खाना हुनेछ। तर, अन्य जीव (तिनीहरूलाई परजीवी) को खर्च मा अवस्थित धेरै परजीवी कीडे छन्। कारण आदर को कमी गर्न व्यक्तिगत स्वच्छता जस्तै परजीवी मा र मानव शरीर भित्र प्राप्त र वर्ष को लागि त्यहाँ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब यो स्वच्छता को सरल नियमहरू पालन गर्न कसरी महत्त्वपूर्ण तपाईं महसुस कि: फोहोर भाँडा प्रयोग छैन, खाने अघि हात धुन, झिंगा उपस्थिति अनुमति छैन। खैर, अन्य जीव बसोबास कीडे, बिस्तारै आफ्नो मास्टर विषाक्तता, आफ्नो जीवन को हानिकारक उत्पादनहरु फेंकना। व्यक्ति स्नायु हुन्छ, आफ्नो सबै कष्टप्रद, उहाँले चाँडै थकित र कमजोर हुन्छ, स्थिर नशा छ, र तपाईं डाक्टर विशेष हालतमा यो सारा जनावर मानव शरीर बाट हटाउने एउटा गम्भीर हस्तक्षेप हुन अनिवार्य छ।
जनावरहरूको विभिन्न पनि ठूलो clams छ। यो समूह 130 भन्दा बढी हजार प्रजाति छन्। र तिनीहरूले पनि रूखहरू मा, लगभग कहीं बाँचिरहेका छौं। तर ती सबै भन्दा विभिन्न गहिराइमा मा सागर बसोबास। वर्षको तिनीहरूलाई केही सयौं। बिरुवाहरु दुवै र साना जनावर र जैविक फोहोर मा शंख फिड। तिनीहरूलाई लगभग सबै (पनि क्लैम छ जो उदाहरण व्यंग्य, लागि, बाहेक, तर खोल को शुरुवात छ) एक खोल को रूप मा सुरक्षित छन्। मान्छे लामो खाना लागि शंख खपत गरेका छन्। यो समूह केही सदस्यहरू पनि व्यञ्जनहरु छन्।
यो तारे माछा (1,500 प्रजाति), किनभने शरीर मा रेज यसको नाम पायो (धेरै तिनीहरूलाई पाँच हो, तर केही पनि गर्न 50 टुक्रा लागि खाता)। समुद्र बस्ने ताराहरू, आकार र रूप मा भिन्न छन्। को तारे माछा को एक विशेषता सुविधा - सुधारना गर्न (छेपारो जस्तै) क्षमता। जनावर गरेको severed limbs भने यसको ठाउँमा यो नयाँ दर मा बढ्छ। पृथक नयाँ व्यक्तिगत एक बीम अनुकूल अवस्थामा विकास। सबैभन्दा तारे माछा - शिकारीहरु।
समुद्र urchins (800 प्रजाति) पनि echinoderms हौं। अर्चिन शरीर विभिन्न आकार को सुई ढाकिएको छ। एक sprouting लम्बाइ 30 सेन्टिमिटर पुग्न सक्दैन। JERZY सुई को मद्दतले सार्न। र तिनीहरूलाई केही अन्य जनावर को लागि, धेरै विषाक्त खतरनाक छन्।
टाउको, thorax र भुँडी: यी पशुहरू को शरीर Armored खण्डहरूमा हुन्छन्। को भुँडी र छाती मा अवस्थित छ जो Limbs, क्यान्सर सतह मार्फत सार्न अनुमति दिन्छ। आफ्नो आँखा माथि धेरै सानो खाडल बनेको हो, र टाउको मा जबड़े धेरै जोडी छन्।
Arachnids र कीराहरू
संसारमा जीवित जनावर को एक किसिम, राम्रो प्रतिनिधित्व छ, र जो त्यहाँ 27,000 भन्दा बढी प्रजाति छन् यी समूह। यी दुई सम्बन्धित समूह। आठ - मात्र कीरा छ खुट्टा र spiders छ। अहिलेसम्म सबै कीराहरू पनि शैशवकालदेखि मा, पखेटा छ। Spiders पखेटा उपलब्ध छैन। साथै, शरीर संरचना फरक छ: कीराहरूको एक टाउको, thorax र पेट, र spiders छ - cephalothorax र भुँडी।
हाम्रो ग्रहमा बस्ने जनावरहरूको एक किसिम, यो vertebrate दस्ते केलाउँदा कल्पना गर्न सजिलो छ। यो माछा, तराजू ढाकिएको। तिनीहरूले जो बीच समय अतिप्राचीन (शार्क, देखि सागर inhabiting धेरै प्राचीन छ प्रजाति को एक महान विविधता, हो crossopterygian माछा)। यो र amphibians र सरीसृप, र चरा, र दुनिया बसाबास गर्नु भनेर स्तनधारी। जनावरहरूको विभिन्न पनि एक अनुभवी zoologist धेरै प्रजाति प्रकृति अवस्थित कसरी प्रश्न गर्न यथार्थ जवाफ दिंदैन त ठूलो छ। कुनै निश्चित जवाफ छ र किनकी: निरन्तर नयाँ खोल्न, केही अवस्थित प्रजाति गायब। यो जनावर को अनन्त विविधता (फोटो माथि हेर्नुहोस्) समावेश जो प्रकृति को चक्र, बाहिर।
सहायता र पदमा छोराछोरीको शिक्षाका लागि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकहरूको आमाबाबुले धन्यवाद: नमूना
Korolenko: "विरोधाभास"। सारांश, कलात्मक कामहरू विश्लेषण
स्टेम के हो? स्टेम को संरचना र अर्थ
पानी जैविक भूमिका। जीवन पानी बिना सम्भव छ कि छैन भनेर
साहित्य मा एक निबंध एक परिचय कसरी लेख्न? साहित्य मा एक निबंध कसरी सुरु गर्ने?
ABS-प्लास्टिक: विशेषताहरु, लाभ र बेफाइदा
घर-कुक ह्यामबर्गर एउटा राम्रो तरिका
Lorentz बल के हो?
जहाँ एक बच्चा संग नयाँ वर्षको छुट्टी मा जान छनौट
Yaroslavskyy मास्को क्षेत्र (उत्तर-पूर्व)
के एन्टेना दिन आवश्यक छ
कसरी बाक्लो फोम कफी मा क्रीम ह्विप गर्न
ब्राण्ड बैग बैग बैग: ग्राहक समीक्षा
रगत कम फलाम स्तर सुनुवाइ हानि सम्बन्धित हुन सक्छ
मान्छे प्रेम गर्छ नगर्ने मानिस हुनुहुन्छ?
को ग्रीवा मेरुदण्ड को osteochondrosis मा चिकित्सा व्यायाम